SDL 2.0.16 inouya nekuvandudzwa kweWayland, Pipewire uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
SDL 2.0.16 inosvika pamwe nekuvandudza kweWayland, Pipewire uye nezvimwe
Mazuva mashoma apfuura kuburitswa kweshanduro nyowani ye SDL 2.0.16 raibhurari yakaziviswa (Nyore DirectMedia Layer), yakagadzirirwa kurerutsa kunyora kwemitambo uye kunyorera multimedia. Mune iyi vhezheni itsva shanduko dzakasiyana dzakawedzerwa, pakati payo kusimudzira kwekutsigira kweWayland kunoonekera, pamwe nekugona kugadzira uye kutora odhiyo uchishandisa iyo Pipewire multimedia server nezvimwe zvinhu.
Nyore DirectMedia Layer yakanyorwa muC, inoshanda natively neC ++ uye kune zvinongedzo zviripo kune mimwe mitauro yakati wandei, kusanganisira C # uye Python, inogoverwa pasi pezlib rezinesi, rezinesi iri rinotendera kushandisa SDL zvakasununguka mune chero software.
1 Main nyowani maficha e SDL 2.0.16
2 Maitiro ekuisa yakapusa DirectMedia Layer paLinux?
Main nyowani maficha e SDL 2.0.16
Mune iyi vhezheni nyowani yeSDL, imwe yezvinhu zvitsva izvo zvimire pachena ndezvekuti tsigiro yeWayland yakagadziridzwa zvikuru, kunze akawedzera kugona kugadzira uye kutora odhiyo uchishandisa Pipewire Media Server uye AAudio (Android) uye zvakare inotsigira yeAmazon Luna uye Xbox Series X mutambo wekudzora.
Imwe shanduko yatinogona kuwana ndeyekutie yakawedzera rutsigiro rweyakagadziriswa vibration mhedzisiro (kurira) mukati Google Stadia uye Nintendo Shandura Pro vanodzora kana uchishandisa mutyairi weHIDAPI.
Pamusoro pazvo CPU mutoro waderedzwa kana uchigadzirisa mafoni SDL_WaitEvent () uye SDL_WaitEventTimeout () uye tsananguro yeSIMD yekuwedzeredza inoenderana neElbrus chikuva yakawedzerwawo.
Kune chikamu yezvinhu zvitsva izvo zvakarongerwa mushanduro iyi nyowani, zvinotevera zvinotaurwa:
SDL_FlashWindow () - Inokutendera iwe kuti utore kutarisisa kwemushandisi.
SDL_GetAudioDeviceSpec (): ndeyekuwana ruzivo nezve yakasarudzika fomati odhiyo yeyakatsanangurwa mudziyo.
SDL_SetWindowAlwaysOnTop (): yakanangana nekuchinja zvine simba mureza we SDL_WINDOW_ALWAYS_ON_TOP (anchor pane zvimwe zvirimo) yeiyo hwindo rakasarudzwa.
SDL_SetWindowKeyboardGrab (): kutora kuiswa kwekhibhodi kwakazvimiririra mbeva.
SDL_SoftStretchLinear (): yezve bilinear kuyera pakati pe 32-bit nzvimbo.
SDL_UpdateNVTexture (): kugadzirisa zvinyorwa muNV12 / 21.
SDL_GameControllerSendEffect () uye SDL_JoystickSendEffect (): kutumira zvimiro zvetsika kune DualSense mutambo vatongi.
SDL_GameControllerGetSensorDataRate (): kuwana dhata pamusoro pekusimba kweruzivo rwunogamuchirwa kubva kune ma sensors e PlayStation uye Nintendo Shandura vatongi mutambo.
SDL_AndroidShowToast (): izvi zvinobvumidza kuratidza zvivheneko zvemwenje papuratifomu yeApple.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo yeiyi vhezheni itsva, unogona kutarisa iyo ruzivo mune inotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa yakapusa DirectMedia Layer paLinux?
Kuisa raibhurari iyi paLinux kuri nyore sezvo kugoverwa kweLinux kuchinayo mukati mezvinhu zvavo
Kana iri Debian, Ubuntu uye kugoverwa kunobva pane izvi, iwe uchafanirwa kumhanya chete inotevera mirairo mune chinouraya:
Panyaya yenyaya yeavo vari uArch Linux suarios isu tinongofanirwa kumhanya zvinotevera:
Muchiitiko cheavo vari vashandisi ve Fedora, Centos, RHEL kana chero kugoverwa kunoenderana navo, ivo vanongofanirwa kumhanya unotevera kuraira:
Kune mamwe ese maLinux kugoverwa, ivo vanogona kutsvaga iyo package "sdl" kana "libsdl" yekumisikidza kana kurodha pasi uye kuumbiridza sosi kodhi.
Vanoita izvi ne:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » SDL 2.0.16 inosvika pamwe nekuvandudza kweWayland, Pipewire uye nezvimwe
Iyo Steam Deck yadzoka kuzotora Linux gamers ku1%